आज, मिडिया चिकित्सा बिषय मा जानकारी को धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। विशेष चासो जानकारी मानिसको genitourinary सिस्टम को स्वास्थ्य र आफ्नो यौन स्वास्थ्य सम्बन्धित छ, तर धेरै अक्सर यो यौन गतिविधि धेरै र प्रजनन स्वास्थ्य विशेष मा, हर्मोन सम्बन्धित छ भन्ने तथ्यलाई गर्न सन्दर्भ बिना लागू छ, यस्तो हर्मोन टेस्टोस्टेरोनको र एस्ट्रोजन रूपमा । आजको लेखमा हामी हर्मोन मानव शरीर मा छ के टेस्टोस्टेरोन र कस्तो प्रभाव कुरा हुनेछ। टेस्टोस्टेरोनको महत्त्व बुझ्न राम्रो पुरुष प्रजनन प्रणालीको संरचना र कसरी एक स्वस्थ अवस्थामा यसलाई कायम राख्न बुझ्न मद्दत गर्छ।
त्यसैले, टेस्टोस्टेरोनको के हो? समावेश गरिएको छ यो अवधारणा र manly उपस्थिति, र बाल को एक प्रशस्त र कम - यो मुख्य "पुरुष" जसको उपस्थिति लोकप्रिय भएको "पुरुष स्वास्थ्य" भनिएको छ के प्रदान गर्दछ हर्मोन छ आवाजको टोन, पाठ्यक्रम र, यौन आकर्षण। हर्मोन नाम ल्याटिन "testikulus" बाट आउँछ किनभने, यो टेस्टोस्टेरोनको उत्पादन पुरुषहरु testicles मा मुख्यतया कि अनुमान गर्न गाह्रो छैन। साथै, हर्मोन को एक सानो राशि महिला ovaries र पुरुष र महिला दुवै मा adrenal ग्रन्थीहरूको उत्पादित।
टेस्टोस्टेरोन छ र के यो पुरुष शरीर, मुख्य कार्यहरु यस हर्मोन द्वारा प्रदर्शन को एक संक्षिप्त सूची लागि यति महत्त्वपूर्ण छ के राम्रो बुझ्न क्रममा:
टेस्टोस्टेरोनको पर्याप्त मात्रा को उपलब्धता, बोसो कक्षहरू र मांसपेशी निर्माण बाल्न शरीर संकेत पनि हड्डी बलियो बनाउँछ।
हर्मोन प्रणाली को एक यौन गतिविधि को स्तर regulates, विशेष, उत्पन्न spermatozoa संख्या र खाद आफ्नो क्षमता, erectile समारोह, विपरीत सेक्स को ब्याज को स्थिरता लागि जिम्मेवार छ।
जोखिमपूर्ण कारोबार र adventurism झुकाउ जुवा को हदसम्म ऊर्जावान, प्रतिबद्ध, खुला - टेस्टोस्टेरोनको मानिसको चरित्र को गठन को लागि जिम्मेवार छ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो यो हर्मोन को स्तर उपस्थिति र चरित्र, यौन संविधान निर्धारण छ। दुर्भाग्यवश, त्यहाँ अवस्थामा जब टेस्टोस्टेरोनको स्तर मानव शरीर मा प्राकृतिक दर अनुरूप छैन। मानिसको टेस्टोस्टेरोनको स्तर सामान्य भन्दा धेरै कम छ भने, यो तेजी वजन प्राप्त छ, आफ्नो चरित्र पनि नरम, शरीर मा वनस्पति को राशि, कम छ बन्नेछ libido घट्यो। उल्टो प्रक्रियाको शरीर मा टेस्टोस्टेरोन को एक अतिरिक्त जब - एक मानिस एक "राजा र भगवान" जस्तै महसुस गर्न थाल्छ, वर्ण पनि आक्रामक देखिन्छ, र उपस्थिति मा यसको ऐतिहासिक पुर्खा भेट्नुपर्छ गर्न सुरु - मान्छे। हुन्छ महिला मा अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोनको - यो मामला मा, तिनीहरूले "माथि बढ्न" सुरु: वहाँ एक प्रशस्त शरीर कपाल हो (विशेष मा, "whiskers"), आफ्नो आवाज, परिवर्तन coarsens शरीर अनुपात।
को ठीक गर्नु गर्न हर्मोन, तपाईं टेस्टोस्टेरोनको के स्तर निर्भर मा बुझ्न आवश्यक छ। मानव शरीर मा हर्मोन को राशि असर, मुख्य कारक रक्सी देखि आहार र Basal आहार, अतिरिक्त वजन को उपस्थिति, खाने वा abstinence हो, शारीरिक गतिविधि, यौन गतिविधि र उचित बाँकी (धेरै मानिसहरू द्वारा प्रेम, खैर, बियर masculinity को सबैभन्दा खराब शत्रु छ) । एक स्वस्थ जीवन शैली, शारीरिक र मानसिक श्रम, अवकाश र उचित पोषण को सफल संयोजन मानिसहरू अधिकतम क्षेत्रमा टेस्टोस्टेरोनको स्तर कायम गर्न मद्दत गर्नेछ।
आशा छ, यो लेख मा हाम्रो पाठकहरु टेस्टोस्टेरोनको छ के बुझ्न र यो मानव शरीर यसको प्रभाव कसरी महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले, सेक्स जीवनमा समस्या पत्ता लगाउन, यो विचार - लक्षण सम्भावित अपवाद संग, जो कुनै पनि समस्या को कारण हुन सक्छ हर्मोन, ध्यान गर्नुपर्छ।
राम्रो सस्ती डिजिटल क्यामेरा: मूल्यांकन, समीक्षा, विनिर्देशों र मालिकको समीक्षा। एसएलआर क्यामेरा किफायती र राम्रो - कसरी चयन गर्न
स्ट्रोक पछि विरामीहरु को ख्याल। स्ट्रोक पुनर्वास
सानो ट्युमर र यसको प्रजाति
के तपाईं मतलब इन्टरनेट ट्रोल गर्छन्, यो कसरी भेद गर्न? इन्टरनेट मा trolls कसरी कमाउने? कसरी इन्टरनेटमा trolls सामना गर्न? कसरी इन्टरनेटमा trolls सामना गर्न?